Ereyo Jaceyl - Fox Articles
Home/Talooyin iyo Tusaalooyin/Ereyo Jaceyl
David 5 days ago	Talooyin iyo Tusaalooyin
Haddii ay jirto in qof bini aadam ah baahi loo qabo nafteyda adiga ayey ku tebeysaa oo ay ku qanacsan tahay, iyadoo aanan ka fekereyn culeysyada imaan kara mustaqbalka, nafteyda ayaa kuu dhego nugul, dhegaheyga waxa ay maqlaan erayadaada oo keliya ,indhaheygana aragtidaada ayaa daawo u ah.
Waa igu adag tahay inaan saacado ku waayo waxaana taas sabab u ah qalbiga oo aan u dulqaadan karin in uu iska kaa masaxo inta aan ku sugaayo, waa ay igu adag tahay in aan joojiyo tirinta daqiiqadaha, waxaase iiga sii adag inaan ku waayo sababtoo ah xusuusteyda iyo maskaxdeyda ayaad meel adag ka degan tahay, shalaaydu waa qeyb ka mid ah guuldarada laakin tartarka soo jiidashadaada waa u qalantaa qofku in uu wajaho guuldarooyin badan.
Waan kuu riyaaqaa, waxaana tahay sababta aan u noolahay haddii aniga xageyga ay sidaas tahay ogoow meel ka mid ah dunida waxaa ku nool qof riyoodiisu tahay dhoola cadeyntaada, waan ku jeclahay in ka badan inta aan wadajirno, waxaana heystaa wax walbo oo aan u baahanahay wada joogeena, waxaad tahay rajadeyda iyo dhamaan riyadeyda wax dhib malahan wax kasta oo nagu dhaco mustaqbalka wadajirkeena ayaa wax walba ka weyn marwalbana dhinacaaga ayaan taagnaan doontaa.
Boqolaal qalbiyo aad ayey uga yar yihiin in ay qaadaan dhamaan jaceylka aan kuuqabo, maba ogeyn ebedkey macnaha jaceyl ilaa adiga aad iga soo hor baxday.
Farxadeyda ugu weyn waa dhoolacadeyntaada iyo in aad mar walbaa wehelkeyga tahay.
Previous Caloosha iska yaree
Next Filimka walaalaha waqtiga
Daraasaddo dhawr ah oo xiriir ah oo ay sameeyeen xeel dheerayaasha arrimaha Jacaylku ayaa shaaciyay …